Kulan qarsoodi ah oo dhex maray Xildhibaano ka tirsan BF & Muqtaar Roobow - Latest News Updates
Kulan qarsoodi ah oo dhex maray Xildhibaano ka tirsan BF & Muqtaar Roobow
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kulan qarsoodi ah maanta gelinkii dambe dhex maray xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka iyo Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur, kulankaasi ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan waan waan lagu sii deynayo Roobow iyo qodobo kale.
Xildhibaanada oo tiradooda lagu sheegay ilaa shan mudane ayaa ka soo jeeda degaanada K/Galbeed isla markaana ergo waanwaan ka dhex bilaabay in xaliyo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Muqtaar Roobow oo horay u ahaa Ku xigeenka hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab balse ka goostay.
Arrimaha ugu muhiimsan ee Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka kala hadleen Muqtaar Roobow oo ku xiran xabsi ciidamada Nabadsugidda NISA ay ku leeyihiin xarunta Habar Khadiijo ee magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa inuu aqbalo shuruudo dowladdu ku xirtay sii deyntiisa.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in shuruudaha ay ka mid yihiin sidii uu dowladda ugu wareejin lahaa ciidamadiisa oo gaaraya in ka badan 2-Kun maleeshiyo.
Kulankaan oo ahaa mid qarsoodi ah ayaa qaatay muddo ka badan hal saac, iyadoo Muqtaar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiinta maamulka K/Galbeed ay ka muuqato dhaawacyo ay u geysteen ciidamada Itoobiyaanka ah markii uu isku dayay inuu dagaalamo.
Previous articleDowladda Federaalka oo dib u dhigtay tartanka K/Cagta maamul goboleedyada & G. Banaadir